धोकेबाज हुन्छन् यी ३ राशिका युवतीहरु, कतै तपाई नि त पर्नुभएन ? – Krazy NepaL
April 13, 2021 784
काठमाडौँ । आजकल केही मानिसहरू विश्वास तोड्नमा पछि पदैनन्। धेरै पटक जस्तो तपाई त्यस्ता युवतीहरुसँग प्रेममा पर्नुहुन्छ, जसले धोका दिन कुनै समय लिदैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रेम गर्नु अघि थोरै अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ, तर प्रश्न यो छ कि यस्तो कुरा कसरी फेला पार्ने। हामी तपाईंलाई त्यस्तै राशि का युवतीहरुको बारेमा बताउँछौं, जसले धोका दिन्छन्।
मिथुन राशि भएका युवतीहरु केहि नयाँ गर्न इच्छुक हुन्छन्। यस्ता युवतीहरु हरेक कुरामा चाँडै बोर हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा, रिलेसनसिपमा नयाँ रमाइलोपन नमिलेमा पार्टनरलाई बिर्सन यिनीहरुले कुनै समय लिदैनन्।
धनु राशिका युवतीहरु साहसिक र एडवेन्चर प्रकारको मन पराउँछन्। उनीहरूले बाउन्स डान्सलाई मन पराउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा, जब पार्टनरले केहीको लागि उनीहरूलाई रोक्छ, तब यी युवतीहरु त्यस्ता युवकहरुको कुनै पनि सम्बन्धमा लामो समय सम्म बस्दैनन्।
सिंह राशिका युवतीहरु दिल नभएका हुन्छन्। यिनीहरूको लागि आफु भन्दा ठुलो कोही हुदैनन् भन्ने ठान्दछन् । आफ्नो पार्टनरलाई पनि होईन। यी राशिका युवतीहरुलाई हर समय ध्यान चाहिन्छ र यदि उनीहरूको आवश्यकता पूरा भएन भने उनीहरूले तुरुन्तै पार्टनरलाई बदल्छन्।
Prevमेष राशिका लागि अत्यन्तै फलिफाप २०७८ साल ? हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल !
मेरो आमा पछिको सब थोक तिमी नै थियौ , हामी सबैलाई एक्लै बनाएर कसरी जान सकेउ तिमी !
यी ४ राशिका मानिससँग हुन्छ निकै अद्भुत शक्ति
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (17145)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (13009)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12605)